Nagarik Shukrabar - मीटू मुभमेन्टमा गायिका एन्जिलाको अनुभव ः' नबोलेर पो हेपिएका रहेछौँ'
बुधबार, ०४ बैशाख २०७६, ०५ : ०२ | अनिल यादव
‘त्यो अनुभव सुनाएपछि कुनै पनि संगीतकार खराब नियतले प्रस्तुत हुने हिम्मत गर्दैनन्, पोल खोल्दिएला कि भनेर डराउने गरेका छन् । यहाँ त हामी नबोलेर पो हेपिएका रहेछौँ, बोलेपछि सबै ठेगानमा आउने रहेछन् !’
२०७४ को अन्त्यतिर सांगितिक क्षेत्रको यौन दुब्र्यवहारको पोल खोलेकी गायिका एन्जिला रेग्मीको अहिलेको अनुभव हो यो ।
चैतको अंकमा रेग्मी सहित मीना सिंह, सुशीला पाठक, सरु गौतम र प्रविशा अधिकारीले शुक्रवारमार्फत नेपाली संगीत जगत्मा गायिकामाथि संगीतकारबाट हुने दुव्र्यवहारको फेहरिस्त सार्वजनिक गरेका थिए ।
उनीहरुले आफुमाथी भएको यौन दुब्र्यबहारको घटना घटनाक्रम सहित खुलाए पनि सम्बन्धित ब्यक्तिको नाम खुलाएका थिएनन् । दुब्र्यबहारको घटनाक्रम निक्कै डरलाग्दो थियो । बाहिरबाट हेर्दा नेपाली संगीत जगत् जति सुरिलो भए पनि भित्रबाट कति रुखो रहेछ, उनीहरुको डरलाग्दो भोगाइले छर्लङ्गै भयो ।
खबर बाहिरिएपछि संगीत जगत्मा ठूलै तरंग आयो । सामाजिक सञ्जालमा शुक्रवारको कभर स्टोरीले बहस सिर्जना गर्यो । कतिपयले संगीतकारको नाम नलिएको निहुँमा उल्टै गायिकालाई गाली गरे तर धेरैजसोले गायिकाहरुको साहसलाई सलाम ठोके ।
कलाको आवरणमा मौलाएका यौन पिपासुको जालो सार्वजनिकहुँदा अन्यत्र झै नेपालमा पनि कलाकारले संगठित रुपमा आवाज उठाउन सक्थे । केहीले प्रतिकृया जनाए पनि अधिकांश मौन बसिदिए, केही नभएझै ।
संगीतकारहरुको संगठन गम्भीर हुनुको साटो उल्टो गायीकामाथि खनियो । संगीतकारहरु गायिकालाई बहिष्कार गर्नतिर लागे । दुव्र्यवहारविरुद्ध बोलेपछि उनीहरुलाई मानसिक रुपमा कमजोर बनाउन संगीतकारहरुको गुटै सक्रिय देखियो ।
खरावहरुको गठजोडले केही समय प्रभाव देखाए पनि त्यसको प्रभाव लामो समय रहेन । जे–जस्तो धम्की आए पनि त्यो घटनापछि पाँच गायिकाहरु संगीत क्षेत्रबाट हराएनन्, बरु झन् सक्रिय रुपमा देखा परिरहेका छन् । एन्जिलाका थुप्रै गीतले युट्युबमा करोड भ्युज पाइरहेका छन् ।
ब्लकबस्टर हिट फिल्म ‘६क्कापन्जा ३’मा समेत उनले गाउने अवसर पाइसकिन् । प्रविशा पनि पाश्र्व गायनमा निकै सक्रिय देखिन्छिन् । सरु गौतम, सुशीला पाठकका गीतहरु धमाधम सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
सन् २००६ मा हलिउडबाट शुरु भएको मीटू मुभमेन्ट नेपाल भित्रिन झण्डै १२ वर्ष लाग्यो । अमेरिकी अभियन्ता टुराना बर्कले आफूले भोगेको यौनजन्य दुव्र्यवहारबारे खुलेर बोल्न नसक्नेहरुका निमित्त यो अभियान २०१८ मा नेपाल छिर्यो । यत्रो वर्षपछि अभियान त छिर्र्यो तर प्रभाव जमाउन सकेन ।
अमेरिकामै यो अभियानले गति लिन सन् २०१७ कुर्नुपर्यो, त्यो पनि हलिउड अभिनेत्री एलिसा मिलानोले आफ्नो मीटू अनुभव सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्त गरेपछि ।
उनले जसै आफ्नो ट्वीटरमा, ‘तपाईँहरू कुनै पनि किसिमको यौनजन्य दुव्र्यवहारमा पर्नुभएको छ भने ‘मीटू’ लेखेर आफ्नो अनुभवलाई रिप्लाई गर्नुस्’ भनेर आह्वान गरिन्, त्यसपछि संसारभर यो अभियानले चर्चा पायो ।
त्यसपछि अमेरिकाको राजनीतिक, शैक्षिकदेखि व्यापारिक जगत्सम्म यो अभियान डढेलोसरी फैलियो । कतिसम्म भने हार्भे वाइन्स्टिनजस्ता कहलिएका हलिउड फिल्म निर्माताले आफु कंगाल भएको घोषणै गर्नुपर्र्यो ।
भारतीय फिल्म नगरी बलिउडमा फाट्टफुट्ट घटना आए पनि प्रभाव देखिएको थिएन । सन् २०१८ मा अभिनेत्री तनुश्री दत्तले जव मुख खोलिन् हंगामा भयो । उनले चर्चित अभिनेता नाना पाटेकरले यौन दुव्र्यवहार गरेको रहस्योद्घाटन गरेकी थिइन् । त्यो डढेलो बढ्दा बलिउडका धेरै हस्तीको ‘स्वच्छ छवी’ धमिलो भयो । अनु मलिकले इन्डियन आइडलको निर्णायकको भुमिका छाड्न बाध्य भए ।
नेपालमा फाट्टफुट्ट यसबारे चर्चा हुने गरे पनि दमदार रुपमा शुक्रवारले यो विषयको उठान गरेको थियो । शुक्रवारले विषयको उठान मात्र गरेन २०७५ भर ‘मीटू’ मुभमेन्ट पछ्याइरह्यो ।
स्टेज सो दिलाइदिने प्रलोभनमा हुने शोषणमाथि अर्को एउटा कभरस्टोरी प्रकाशित भयो । स्टेज कार्यक्रममा बोलाउने बहानामा आयोजकले कलाकारलाई के–कसरी दुव्र्यवहार गरिरहेका छन् ? त्यसको नालीबेली खोतलिएको थियो त्यसमा ।
मोडल प्रमिला न्यौपानेको अनुभव निक्कै तितो थियो । उनलाई मलेसियाको कार्यक्रममा लगेबापत सेक्स प्रस्ताव राखिएको खुलासा गरेकी थिइन् । त्यस्तै, अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा रहेकी गायिका निक्की कार्कीले आयोजक मध्येका एक सदस्यबाट दुव्र्यवहारमा परेको घटना डरलाग्दो थियो ।
रिपोर्टिङका क्रममा थाहा भयो, स्टेज सोको बहानामा हुने दुव्र्यवहार र शोषणबारे कलाकार खुलेर बोल्न डराउँछन् । कारण– स्टेज कार्यक्रम नपाइने डर । आयोजकहरुले ठाडै प्रस्ताव राख्ने, जबरजस्ती गर्न खोज्नेलाई झेल्दा पनि मिडियामा यी कुरा सार्वजनिक गर्दा अर्कोपल्टदेखि कार्यक्रममा नबोलाउने डरका कारण यस्ता शोषण भित्रभित्रै लुक्ने गरेको देखियो ।
शुक्रवारले ‘मीटू’ एजेन्डा स्टोरीमार्फत् मात्रै सम्बोधन गरेन, अन्तरंग कुराकानीमा उठाइरह्यो । प्रायः अन्तरंग कुराकानीका पात्रसँग उनीहरुको दुव्र्यवहार भोगाइबारे सोध्दा कतिपय नउधिनिएका कुरा छर्लङ्ग भए ।
रंगकर्मी आकांक्षा कार्कीले रगमञ्चमा यौन शोषणको डरलाग्दो अवस्था दर्शाएकी थिइन् । अभिनेत्री लक्ष्मी बर्देवाले शुक्रवारसँग पाँच वर्षअघिको तीतो अनुभव सुनाइन् । जुन घटनाका पात्र थिए नेपाली फिल्मका चल्तीका एक निर्देशक जसले अडिसनको बहानामा होटलमा बोलाएर ठाडै यौन प्रस्ताव राखेका थिए ।
शुक्रवार मात्र्र हैन अन्य सञ्चारमाध्यमले पनि विस्तारै मिटु अभियानबारे समाचार सम्प्रेशण शुरु गरे । प्रदेश नम्बर ३ का तत्कालीन मन्त्री केशवकुमार स्थापित मेयरहुँदाको घटना खुलाइन पत्रकार रश्मिला प्रजापतिले ।
उनले काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्व मेयरले आफूमाथि यौन दुव्र्यवहार गरेको रहस्य खोलिन् । उनले मेयरको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दा आफूले जागिरसमेत गुमाउनु परेको तीतो अनुभव मात्रै सार्वजनिक गरिनन्, अरु थुप्रै महिलाले उनीबाट प्रताडित हुनुपरेको दाबीसमेत गरेकी थिइन् ।
३४ वर्षदेखि प्राध्यापनमा संलग्न डा. कृष्णबहादुर भट्टचनमाथि विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत तीन युवतीले यौन शोषण गरेको आरोप लगाए ।
तर न्युन प्रभाव
मिटु अभियानले हलिउडमा असली अनुहार सार्वजनिक गरिदिँदा धेरैको धन्दा चौपट भयो । भारतमा पनि दुव्र्यवहारको आरोप खेपेका अभिनेता नाना पाटेकरदेखि फिल्म निर्देशक राजकुमार हिरानीसम्मले अनुबन्धित भइसकेको फिल्मबाट निकालिनुपर्यो । अनु मलिकले इन्डियन आइडलको निर्णायकको भुमिका छाड्नपर्र्यो ।
तर नेपालमा जो जो माथि आरोप लागे तीनिहरुमाथि नैतिक प्रश्न उठ्ने बाहेकको कारवाही प्रकृया अगाडि बढ्न सकेन । स्थापित मन्त्रीबाट बर्खास्त भए तर मुल कारण १५ वर्ष अगाडिको यौन दुब्र्यबहारको घटना सार्वजनिक हुनुभन्दा पनि मुख्यमन्त्रीसँग गालीगलौचमा उत्रिनु थियो । प्राध्यापक भट्टचनबारे त्रिभुवन विश्वविद्यालय मौन बस्यो ।
ब्यक्ति नतोके पनि कला क्षेत्रमा भइरहेको यस्ता काला कामबारे पोल खुले पनि त्यो प्रयासले संगठित आकारै लिन सकेन । आफ्नो करिअरनै दाउमा राखेर पोल खोल्नेको पक्षमा सम्बन्धित पेशाकर्मी र नागरिक समाज उभिनुपर्नेमा उल्टो औला ठड्याउने काम भयो । जसले यस्तो अपराधमा पिडितहुँदा पनि बोल्न नसकेकाहरुको साहस बढ्नुको साटो उल्टो कुकर्ममा लिप्तहरु नै बलिया देखिए ।
यद्यपि मीटू अभियान जागरणको एउटा यस्तो तहमा पुगेको छ, जसले मनोरञ्जन, प्राज्ञिक र राजनीतिक क्षेत्रमा समेत हलचल मच्चाउन सफल भने भएको छ ।
जो जसले यौन दुब्र्यबहारबारे जे जतिले बोल्ने हिम्मत गरे ती सबैको साहस सलाम योग्य छ । पोल खोल्नेमध्ये केहीले यस्तो नीच काममा सक्रियहरुको नाम शुक्रवारसँग खोलेका पनि छन् जोबारे शुक्रवार निरन्तर निगरानीमा छ ।
‘मीटु सामाजिक हिसाबले प्रभावकारी’
नेपालमा यौन दुव्र्यवहारविरुद्धको मीटू मुभमेन्ट कार्बाहीका हिसाबले प्रभावकारी नदेखिए पनि सामाजिक हिसाबले प्रभावकारी बन्यो । यो गम्भीर मुद्दा रहेछ भन्ने चेतना जनमानसमा परेको छ । जो–कसैलाई अब बोल्दा कसरी, के बोल्ने, के गर्ने–के नगर्नेमा सचेत र सजग गराएको छ ।
जुनसुकै क्षेत्रमा यसको चर्चा छ । हरेक व्यक्तिलाई यसले झस्काइदिएको छ । महिलालाई पनि यो बोल्नुपर्ने विषय रहेछ भन्ने आत्मविश्वास बढेको छ । पुरुषमा पनि मैले केही बिगारेछु भने पोल खोल्दिन्छन् भन्ने भय बढेको छ ।
यौन दुव्र्यवहारबाट प्रताडितको आवाजलाई मिडियाले पनि प्रभावकारी रुपमा उठाएको छ । कतै त सामाजिक कारबाहीसम्म भएका छन् । कानुनी कार्बाही भने कतै देखिएन । हुन त, यस्ता इस्युमा कानुनीभन्दा सामाजिक कार्बाही र बहिष्कार नै बलियो हुन्छ ।
कतिपयको धारणा छ, आरोप लगाइएकामाथि कार्बाही किन भएन ? यसमा भरपर्दो प्रमाणको अभाव नै हो । यस्ता विषयमा कानुनले बलियो प्रमाण भेट्न मुस्किल हुन्छ । कोही आफू दुव्र्यवहारमा पर्छु भनेर हिँडिरहेको हुँदैन । बाटोमा कसैले अचानक दुव्र्यवहार गर्छ भने त्यसको प्रमाण कसरी जुटाउने ? यसको जटिल पाटो नै यही हो ।
उदाहरणका लागि प्रा.डा. कृष्णबहादुर भट्टचनको केसलाई हेर्न सकिन्छ । तीन विद्यार्थीले उनीमाथि दुव्र्यवहारको आरोप लगाए । एकातिर पीडित र पीडितका समर्थकको कुरा आयो, अर्कोतिर भट्टचनका समर्थक । हो र होइन बीच बहस चल्यो । हो भने कारबाही हुनप¥यो, होइन भने सफाई हुनुपथ्र्यो तर केही निष्कर्ष ननिस्की कुरा सेलायो । यस्ता मुद्दालाई हो भने कार्बाही र होइन भने सफाईका लागि सम्बन्धित संस्थाहरुले भूमिका खेल्नु पथ्र्यो ।
मिडियाले पनि मुद्दा उठाउने र निष्कर्षमा नआई छाड्नु हुँदैन । फेरि रेप र दुव्र्यवहारको केसमा सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरुले सकभर कार्बाही नगर्न नै खोज्छन् किनभने हाम्रो सत्ता र शक्ति पुरुषकै हातमा छ । उनीहरुलाई पछि आफू पनि पर्ने डर हुँदोरहेछ । कार्बाही गर्दा पछि ‘आफ्नै खुट्टोमा बञ्चरो’ पर्ने डरले पनि मौन बस्दारहेछन् । अर्कोतर्फ, हामीमा नैतिकता र विवेकको खडेरी पनि छ । त्यसैले हामीकहाँ नैतिक कार्बाहीको अपेक्षा बेकार हो ।
यसको अर्को पाटो पनि छ । मन मिलुञ्जेल राम्रो अनि सम्बन्धमा दरार आएपछि ‘मीटू’ भन्ने परिपाटी पनि छ । यसबाट सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले मीटूको विषय उठाउँदा स–सानो तहबाट विश्लेषण आवश्यक देखिन्छ ।
हामीकहाँ पीडितले आवाज उठाउँदा पीडकको नाम खोल्न चाहेनन् । कतिले पीडा भए पनि साट्न चाहेनन् । कारण, पोल खोल्दा बहिष्कारमा परिने डर । बोल्नासाथ उल्टै नानाथरी आरोप खेप्नुपर्छ । सहानुभूति दिने र समर्थन गर्ने कमै भेटिन्छन् । जसको परिवार बुझ्ने छ, यस्ता विषयलाई सहज रुपमा लिन्छ, तिनीहरुले नडराई बोल्न सक्छन् । त्यसैले मीटू अभियानलाई सफल पार्न पारिवारिक समर्थन पनि अनिवार्य छ ।